Umnandi uDave Homestay - I-Airbnb
Umnandi uDave Homestay
Igumbi lakho lokulala e indlu enevaranda sinombuki zindwendwe onguAnn
I-Sweet Dave yasungulwa kwi-2017 kwaye iququzelele indawo yokuhlala yasekhaya ekuqaleni kwe-2018. Yenzelwe ngumnini uDave. Ukubonakala kwezinto zokuhlobisa kwangaphakathi zintsha. Ifumaneka kumazantsi-ntshona eSaipan, ikufuphi neNtaba yeKarmele Cathedral esiqithini kwaye igubungela ummandla oziimitha ezisisikweri ezingama-214 kunye negumbi lokuhlala eliziimitha ezingama-98. Isitayela sokuhombisa ngokubanzi silula kunye nefenitshala yaseMelika, ukudala umoya ofudumeleyo odibanisa isitayela samandulo kunye nesitayela se-INS samanje.
Igama lika-Sweet Dave lihlawula umvuzo ku-Sweet Dave, omnye wabalingisi bendoda kwi-movie kaQuentin "I-Hatful Eight." ULandlord Ann ungumlandeli wefilimu obalaseleyo kunye nomthandi womculo. Indlela yam yokuzonwabisa idlula kuzo zonke iikona zegumbi, ngoko ke igumbi lahlulwe laba ngamagumbi anemixholo.
Igumbi NO.4 Ingoma yeflamingo.Ngeflamingo epinki, eyona nto idumileyo yosuku. Idome yothando kunye nomgubo werabha. Uyeyona nkosazana incinci intle kwakha kwahlala kuyo. Igumbi elinobuhle bokuhombisa izibane lilungile ukuba lidubule. Ixhotyiswe ngezindlu zangasese zoluntu kunye neendawo zokuhlambela.
I-Sweet Dave ikwindawo yoshishino yaseChalan Kanoa kumazantsi-ntshona eSiqithi saseSaipan, ecaleni kwendlela enkulu kwaye ecaleni kwevenkile enkulu yasekhaya. Ngaphakathi kweehotele zehotele kunye neendawo zokuhlala zininzi. Hamba imizuzu emihlanu ukuya elunxwemeni kwaye malunga nemizuzu elishumi ukuya eMount Carmel Cathedral, esona sakhiwo sikhulu sibalulekileyo kwesi siqithi. Ngaphaya kwecawe kukho iSugar King Pier, eyona ndawo ithandwayo ngabantu balapha ukubukela ukutshona kwelanga, ukuqubha nokuntywila. Ukuthengwa kokutya kwamaTshayina kunye neNtshona malunga nehotele kukho konke ukufezekisa iimfuno zezidlo ezahlukeneyo.
Ukuba unazo naziphi na iimfuno okanye imibuzo ngexesha lokuhlala kwakho, nceda ufowunele umnini-mhlaba okanye uqhagamshelane nathi ngenye isoftware yengxoxo. Umfanekiso ubonisa imephu yethu yendawo yokuhlala kunye nobomi obujikelezileyo bokutyela kunye nentshayelelo.
Ukuba unazo naziphi na iimfuno okanye imibuzo ngexesha lokuhlala kwakho, nceda ufowunele umnini-mhlaba okanye uqhagamshelane nathi ngenye isoftware yengxoxo. Umfanekiso ubonisa ime…